Madaxda maamul goboleedyada oo curyaamiyey shaqooyinkii hay’adihii dowliga ahaa - Caasimada Online
Home Warar Madaxda maamul goboleedyada oo curyaamiyey shaqooyinkii hay’adihii dowliga ahaa
Madaxda maamul goboleedyada oo curyaamiyey shaqooyinkii hay’adihii dowliga ahaa
Shirkii maamulada Soomaalida iyo Dowlada Federalka u dhexeeyey oo ku soo dhamaadey magalada Muqdisho 11/02/2018 ayaa waxaa kasoo baxay go’aamo Khuseeya arimaha Dastuurka, doorashooyinka Soomaaliya sanadka 2020 iyo heshiis laga gaarey qaybsiga khayraadka Kalumeysiga.
Madaxweynayaasha maamulada Soomaalida oo kulankaas qayb ka ahaa ayaa madaxdooda inteeda badan waxaa aysan kaxaysan ama aan wehelin hay’adihii dowliga ahaa ee ku shaqo lahaa go’aamada ay gaareen.
Madaxweyne Gaas oo kulankaas ka qayb galay ayaa waxaan kulankaas gabi ahaanba aan la socon wasiirada gaar ahaan kuwo howlaha laga wada hadlayey ku shaqo leh.
Gaas oo inta badan u kexeysta kulamada noocaan ah shaqsiyaad uu ku kalsoon yahay kuwasoo aan dood iyo wadaxaajood ka gali karin qodobada maaiiriga ah ee laga hadlayo ayaa Muqdisho waxaa u jooga xubno isaga Wakiil ugu ah iney kamid noqdaan guddiyada socidsiinaya qodobada lagu heshiiyo iyadoo wasaradaha iyo hay’adaha loogu talagaley in lagala xisaabtamo hehsiisyadaan gaar ahaan kuwooda Dastuuriga ah aysan soo dhaafi karin magalaada Garowe.
“Cabdiweli Gaas markii hore ayuu xilalka u dhiibey dad aan wax ka waydiin karin howlaha loo igmadey, waxayna u badan yihiin shaqsiyaad aan horey u soo shaqeyn oo aan laheyn waaya-aragnimo xafiiseed iyo siyaasadeed.” sidaas waxaa sheegey qof aad uga warqaba kulamada Muqdisho madaxda Soomaalidu ku qabsadaan.
Kulanka madaxda Soomaalida Muqdisho uga socdey 6-11 Feb, ayaa waxaa Madaxweynayaasha mamaulada gudiyadii la howl-gali lahaa kuwa Federaalka ay ku darsadeen shaqsiyaad aad ugu dhow kuwasoo ama isku beel hoose yihiin ama jooga xafiisyadooda sida agaasimyaasha madaxtooyada.
Dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu maraya kala guur ah oo go’aamo masiiri ah laga gaarayo mustaqbalka shacbaka Soomaaliyeed kuwasoo loo baahan yahay iney noqdaan kuwa aan qarsoodi aheyn (Transparent).
Maamulada Soomaalida waxaa ku jira kuwo hay’adahooda dowliga ah dhisan yihiin muddo 20 sano ah kuwasoo ay tahay iney ogaadaan heshiis walba oo g’aan ka gaaraya masiirka shucuubta ku nool.
Doorashadii ka dhacdey Soomaaliya 2017 ayaa waxaa dib loogu noqdey nidamakii 4.5 kadib markii Madaxdii markaas joogtey oo ay kamid yihiin kuwa hadda xillalka ka haya maamul goboleedyada danahooda siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale ka eegeen iney sida ay rabaan ka yeelan masiirkii ummadaha ay u matalayeen kulamadaas.